HomeSu'aalMaxay ka dhigan tahay GDPR?
Maxay ka dhigan tahay GDPR?
Aragtida 3.62K 18.5.2018
GDPR - Nidaamka Badbaadada Macluumaadka Guud. Xeerka Nabadgelyada Guud ee Xogta Guud, Zkratka GDPR), ayaa ku dhawaaqay inay ka mid yihiin Radyo (EU) č. 2016 / 679 close dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské UNIE, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních DAT občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.
Mawduuca iyo ujeeddooyinka - In la sameeyo xeerar ku saabsan ilaalinta shakhsiyaadka la xiriira nidaaminta xogta iyo sharciyada gaarka ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa xogta shakhsiga ah. Nidaamku wuxuu ilaaliyaa xuquuqda iyo xorriyaadka asaasiga ah ee shaqsiyaadka diiradda saaraya xaq u lahaanshaha ilaalinta xogta shakhsi ahaaneed. dhaqdhaqaaqa xorta ah ee macluumaadka gaarka ah ee Midowga Yurub ma aha ilaalinta shakhsiyaadka la xiriira nidaaminta xogta shakhsi ahaaneed waxaa xadiday ama mamnuuc ah.
Baaxadda waxtarka - qaanuunka u dhaqmaan processing si toos ah xogta gaarka ah si ay processing non-iswada xogta shakhsiga ku jira diiwaanka ama kuwa in lagu daro diiwaanka. Xeerarku ma khuseeyo hawlgalka xogta shakhsi ahaaneed:
ee waxqabad ee waxqabadyada aan hoos imanayn xeerka Ururka Shaqaalaha;
Dawladaha Xubnaha ka ah waxqabadka hawlaha hoos yimaada Qeybta V ee cutubka 2 ee Heshiiska Midowga Yurub;
qof dabiici ah inta lagu jiro hawlaha gaarka ah ama shaqsiyaadka gudaha;
hay'adaha awoodda u leh ujeedada ka hortagga, baaritaanka, ogaanshaha ama ciqaabidda dembiyada ciqaabta ama fulinta ciqaabta dembiyada, oo ay ku jiraan ilaalinta ka hortagga iyo ka hortagga hanjabaadda nabadgelyada dadweynaha.
Xog-ururinta xogta shakhsi ahaaneed ee hay'adaha, hay'adaha, xafiisyada iyo hay'adaha Ururka shaqaalaha ayaa lagu xakumay xeerka (EC) No 45 / 2001. Xeerka (EC) Maya 45 / 2001 iyo sharciyada kale ee Sharciga ee la xidhiidha qaabsocodka macluumaadka shakhsi ahaaneed waa iyada oo la raacayo mabaadiida iyo qawaaniinta Xeerkan sida ku cad Qeybta 98. Xeerarku waa wax aan caqli gal ahayn codsiga 2000 / 31 / EC Directive.
Macluumaadka shakhsiga ah - Xeerku wuxuu caddaynayaa oo wuxuu ballaarinayaa baaxadda iyo qeexitaanka xogta shakhsiyeed. Macluumaadka shakhsiyeed waa macluumaad kasta oo ku saabsan qof dabiici ah oo la aqoonsaday ama la aqoonsan karo. Sidaa darteed xogta shakhsiga ah waa Data on hay'ad sharci ah tusaale ahaan. (shaqaalaha ay mar hore laakiin haa tahay), xogta ku saabsan dadka dhintay, ma aha in macluumaadka aan qof gaar ah loo aqoonsado (tusaale ahaan. Kaliya magac caadi ah oo la odhan) iyo xogta shakhsiyeed aan xog qarsoodi ah, sidaas darteed kuwa asal ahaan ka soo baxay aqoonsiga qofka laakiin laga saaray buugyarahan. Marka loo eego dhaqanka lid ku ah hore in Directive ee u soocay xogta shakhsiga ah iyo cinwaanada IP firfircoon iyo aqoonsiyada kale dalwaddii.
Waajibaadka - Xeerarku wuxuu ku xiran yahay guud ahaan wuxuuna si toos ah ugu adeegsan karaa dhammaan dalalka xubnaha ka ah.
Laga soo bilaabo content - Xeerku wuxuu qeexayaa mabaadii'da habka xogta shakhsi ahaaneed iyo shuruudaha sharciga ah ee shaqadooda. Waxa kale oo dejisa xaaladaha la siiyo ogolaansho waadax ah in xogta processing iyo bixinta macluumaadka iyo helitaanka xogta shakhsiga ah.
Xuquuqda mawduucyada xogta la xushay - Intaa waxaa dheer, mawduuca xogta wuxuu leeyahay xuquuqaha soo socda:
Ereyga (xaqa loo leeyahay in la illoobo)
si loo yareeyo hawlaha
GDPR ee Jamhuuriyadda Czech - Sida laga soo xigtay Natiijada Rugta Ganacsiga, diyaarinta ganacsatada GDPR ma ahan mid aad u sarreeya dhammaadka 2017, qaar ka mid ah oo aan xitaa ogayn waajibaadka cusub ee goobta ilaalinta xogta shakhsiyeed. Hirgelinta GDPR waa in aysan qaadan wax ka badan bil gudaheeda mulkiilayaasha ganacsiga.
Waayo, dugsiyada, GDPR hordhaca ah waxay ka dhigan tahay isagoo heshiis si fiican loo sameeyey, maxaa yeelay, haddii waalidka qaarkood ku heshiin karin, yareeyo suurtagalnimada ee bandhigga dugsiga, waxaad u baahan doontaa in aad isticmaasho blacking, iyo fasalo qaar ka mid ah aan loo soo bandhigi karaa oo dhan. Ogolaanshaha waalidka lagama maarmaan noqon lahayd in ay u baahan yihiin, tusaale ahaan, xaaladaha ay ilmaha ku guuleystay tartanka xisaabta iyo la oggol yahay in ay toogtaan ogolaanshaha waalidka si ay u daabaco natiijooyinka ku guuleystay tartanka iyo sawiro. Privacy dugsiyada ma aha oo kaliya magacyada carruurta, laakiin waxaa kale oo ku saabsan magacyada waalidiinta ay. Waxaa jira halis ah in madaxda dugsiyadu had iyo jeer ka cabsanayaan inay wax qalad ah sameeyaan.
Sharciga qabyada ah ee ku saabsan habka xogta shakhsi ahaaneed, kaas oo ay ansixisay xukuumaddu, ayaa noo ogolaaneysa inaan oggolaano falanqaynta xogta iyada oo aan waalidku ogolaansho u helin carruurta laga bilaabo sannadka 15. Habka asalka ah wuxuu tiriyaa 13 sanado badan laakiin waxaa lagu kordhiyay hindisaha Xafiiska Ilaalinta Macluumaadka Shakhsiyeed. Ururrada shaqaalaha iyo ururada shaqabixiyayaasha ayaa dalbaday duulimaad 16 sanado badan.
Ilaalinta xogta shakhsiga ah ee cusbataallada, dugsiyada iyo degmooyinka waa in ay daawadaan Ergayga gaarka ah. Xitaa dabayaaqadii September 2017 degmooyinka, maamulka iyo ganacsiga ma cada sida ay u shaqeyn doonaan magacaabay eegto haddii ay jiri doonto ku filan heli karaa, inta ay ku kici iyo halka ay qaadan lacagta.
qiyaasta A muxaafidka ah oo ka mid ah kharashka ka hawlgala magacaabay 600 million, kharashka kale waxaa lagu qarashgareyn doonaa falanqaynta bilowga ah, kombiyuutarada cusub ee soo magacawday iyo software. Maxaa yeelay, waxa jira yaraan aqoonyahanka, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo xaqiiqada ah in ku takhasusay shaqeyn karaan hoolalka more magaalada, laakiin waxaa suurto gal ah in degmooyinka waaweyn oo leh hal magacaabay ma noqon doonto in ku filan oo ay wax dheeraad ah u baahan tahay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa lagu talinayaa in ergo ay ka shaqeeyaan ugu badnaan toban degmo.
PetrPikora.com Weydii su'aasha 18.5.2018